Golaha Ammaanka oo cambaareeyay hubka Soomaaliya la geeyo oo gacanta u gala Alshabaab - Jowhar somali news leader
Golaha Ammaanka oo cambaareeyay hubka Soomaaliya la geeyo oo gacanta u gala Alshabaab
By Mahad	 On Nov 16, 2021
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa cambaareeyay hubka la geeyo dalka Soomaaliya ee gacanta u gala Xarrakatul Shabaabul Mujaahidiin iyo kuwa kale ee Soomaaliya ka jira, taasoo xadgudub ku ah cunno-qabteynta hubka ee Qaramada Midoobay.
Golaha Ammaanka ayaa Isniintii u codeeyey in muddo sannad ah lagu kordhiyo muddada xayiraadda, isagoo sheegay in dhaqdhaqaaqyada argagaxisada ah ee xiriirka la leh Al-Qaacida ay sii wadaan inay carqaladeeyaan xasilloonida Soomaaliya.
Waxay ku boorrisay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay sii waddo la shaqeynta hay’adaha maaliyadda, hay’adaha maaliyadda ee gaarka loo leeyahay iyo beesha caalamka si ay u xakameeyaan awoodda al-Shabaab in ay dakhli abuuraan, dhaq-dhaqaaqaan, keydiyaan iyo wareejinta kheyraadka si loogu isticmaalo argagixisanimada iyo dhaqdhaqaaqyada kale.
Qaraarka golaha ayaa sidoo kale walaac ka muujiyay warbixinnada joogtada ah ee musuqmaasuqa iyo leexinta hantida dadweynaha ee Soomaaliya. Codeynta ayaa noqotay 13-0, iyadoo Ruushka iyo Shiinaha ay ka aamuseen.
Golaha amaanka ayaa cunaqabatayn dhanka hubka ah iyo cunaqabatayn kale oo adag ku soo rogay dalka Eritrea sanadii 2009-kii, kadib markii ay hub u soo dirtay kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya iyo in ay diiday in la xaliyo muran xuduudeed oo kala dhexeeya Jabuuti oo ah xulafada muhiimka ah ee Maraykanka ee Geeska Afrika. Waxa ay Eritrea ka qaaday cunaqabataynta bishii November 2018.
Ku xigeenka safiirka Ruushka ee Qaramada Midoobay, Anna Evstigneeva, ayaa sheegtay in Moscow ay ka soo horjeesatay tixraaca sababtoo ah “Xaaladda hadda uu marayo xiriirka u dhexeeya Jabuuti iyo Ereteriya maaha mid khatar ku ah nabadda iyo ammaanka caalamiga ah” lagu dhameeyay diblumaasiyad laba geesood ah.”
Shiinaha ayaa ka soo horjeestay in golaha uu ku guuldareystay in wax laga bedelo cunaqabateynta hubka, iyadoo dowladda Soomaaliya ay dhowr jeer ka codsatay, in la aqoonsado tilaabooyinkeeda ku aaddan dib u dhiska iyo qaadashada mas’uuliyadda amniga dalka.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay oo kaliya ayay Soomaaliya bilowday in ay cagaheeda isku taagto ka dib sodon sano oo fowdo ah oo ay ku jirtay hogaamiye kooxeedyadii ku biiray Al-Shabaab, waxaana soo baxay koox xagjir ah oo xiriir la leh dowladda Islaamka. Sannadkan, qalalaase siyaasadeed ayaa dib u dhigay doorashooyin muddo dheer dib u dhacay, inkastoo la sheegay inay ugu dambayntii hore u socdaan.
Duterte’s daughter joins the son of the late dictator Marcos in the Philippine presidential bid
Guddoomiye ku xigeenka doorashooyinka Somaliland oo sheegay in laga…